WARBIXIN: Kadib Go’aanka Uu Zinedine Zidane Kaga Baxay Real Madrid-Waa Sidee Xogta Wax Qabadkiisii Los Blancos Ee Waqtigii Uu Bernabeu Soo Maamulay? – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib Go’aanka Uu Zinedine Zidane Kaga Baxay Real Madrid-Waa Sidee Xogta Wax Qabadkiisii Los Blancos Ee Waqtigii Uu Bernabeu Soo Maamulay?
June 1, 2018 Mahamoud Batalaale
Zinedine Zidane ayaa cid kasta kaga yaabsaday go’aanka uu ka gaadhay mustaqbalkiisa Real Madrid, wuxuuna faah faahin cad ka bixiyay go’aanka uu iskaga casilay shaqadii tababaranimo ee Real Madrid isaga oo ku dooday in Los Blancos ay isbadal u baahan tahay isla markaana aanu wax intaas ka badan ka dalban karin ciyaartoyda uu koob kasta kula soo guulaystay.
Zidane ayaa si layaableh horumar aan la filayn uga soo gaadhay shaqadiisii tababaranimo ee ugu horaysay ee Real Madrid wuxuuna Los Blancos ka soo caawiyay in ay taariikh cusub ka samaysay tartanka kooxaha yurub isaga oo waliba markii ugu horaysay muddo shan sano ah u soo qaaday koobka horyaalka La Liga.
Zidane ayaa waqtigiisii ugu fiicnaa ee Real Madrid ku tilmaamay markii ay xili ciyaareedkii hore ku guulaysteen koobka La Liga halka waqtigiisii ugu xumaa uu ku tilmaamay in kooxda Leganes ay Real Madrid tartanka Copa Del Rey kaga reebtay Santiago Bernabeu.
Go’aanka Zinedine Zidane ayaan kaliya dhul gariir ku abuurin Real Madrid iyo Santiago Bernabeu balse waxa uu gilgilay kubbada cagta aduunka iyada oo lagu qaybsamay go’aankiisa. Dadka qaar ayaa u arka in Zidane uu go’aankan gaadhay waqtigii ku haboonaa sida uu isaguba sheegay maadaama oo ay tababarayaal badani Madrid ka baxeen iyada oo sumcadooda lagu dilay in shaqada laga caydhiyay.
Laakiin dad kale ayaa aaminsan in Zidane uu go’aankan aanu qaadan waqtigii ku haboonaa isla markaana ay ahayd in uu sii wato horumarkii cajiibka ahaa ee uu Madrid soo gaadhsiiyay, si kastaba, waxa uu Zidane isku qanciyay in uu soo gaadhay waqtigii ku haboonayd ee uu macalaamayn lahaa Madrid.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xogta muddadii saddexda sano ahayd ee uu Zidane soo hayay shaqada Real Madrid waxyaabihii uu la soo gaadhay iyo rekoodhkiisii wax qabadka Bernabeu oo aad kaaga yaabin doona.
Ugu horayn Zinedine Zidane ayaa Real Madrid soo maamulay 232 kulan oo tartamada oo dhan ah wuxuuna la soo guulaystay 149 kulan halka 104 kulan ay Madrid barbaro soo gashay waxayna Los Blancos soo guuldaraysatay 29 kulan muddadii uu Zidane macalinkeeda ahaa taas oo la micno ah in boqolkiiba 69.79% ay Madrid soo guulaysatay muddadii uu Zidane joogay.
Dhinaca koobabka, Zidane ayaa soo guulaystay final kasta oo uu Real Madrid la soo gaadhay wuxuuna saddex jeer la soo qaaday koobka qaaliga ah ee UEFA Champions League, waxa uu laba jeer kula soo guulaystay UEFA Super Cupka oo uu markii saddexaad ee uu ula tartami lahaa ka hor baxay.
Waxa kale oo uu Zidane kooxdiisii hore ee Madrid uu ka soo caawiyay laba koob oo koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka ah, hal koob oo horyaalka La Liga ah iyo waliba hal koob oo Spanish Super Cupka ah.
Laakiin in Real Madrid uu markale ka caawiyay koobka UEFA Champions League waxay ka dhigan tahay in Real Madrid uu u soo saaray koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka iyo waliba UEFA Super Cupka oo uu tababaraha cusubi ku bilaaban doono.